ဒီတစ်ခါတော့ စကားတွေ အများကြီး မပြောတော့ပဲ တန်ဖိုးရှိတာလေးတွေ တစ်ခါတည်း ပေးလိုက်ချင်ပါတယ် - ဒါပေမယ့် မေးခွန်းလေး တစ်ချို့တော့ အရင်မေးလိုက်ပါရစေ -
မိသားစုဝင်များ အားလပ်ချိန်မှာ ဗွီဒီယိုကားကောင်းတွေ ခံစားကြည့်ရှုရင်း အပန်းဖြေဖို့ စိတ်ကူးလေးများ ရှိပါသလား ??
Premium acc မရှိလို့ ကြည့်ချင်တဲ့ ဇာတ်ကားရဖို့အရေး မိနစ်လက်တံ ထိုင်ကြည့်ပြီး Uploading Site ရဲ့ မျက်နှာစာမှာ သက်ပြင်းခဏခဏ ချနေရပါသလား ??
ယက်ကန် ယက်ကန် Connection မှာ ချလိုက် ပျက်လိုက် Reload လုပ်လိုက်နဲ့ ဇာတ်ကားကြည့်ဖို့ ဘယ်တော့မှ Download မချတော့ဘူးဆိုပြီး လက်လျော့ချင်နေပြီလား ??
အဲ့လို ခက်ခဲနေသူတွေ အတွက် ဖြေဆေး ရှိနေပါပြီ - ကောင်းပေ့ ညွန့်ပေ့ ဇာတ်ကားတွေကို ပြိုင်စံရှားတဲ့ Quality တွေနဲ့ Mediafire Links တွေကနေ တင်ဆက်ပေးထားတဲ့ ဆိုဒ်ကောင်းတစ်ချို့ အကြောင်း ရှာဖွေ စုစည်း တင်ဆက်လိုက်ပါတယ် -
( ၁ ) ဖိုရမ်မှာဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရှိရသော်လည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် Links ပျက်နေသော မိမိကြည့်ရှုလိုသည့် နိုင်ငံခြားဇာတ်ကားကောင်းများအား လွယ်ကူစွာ Download ရယူနိုင်စေရန် -
( ၂ ) အချိန်နှင့် တစ်ပြေးညီ နောက်ဆုံးထွက် နိုင်ငံခြားဇာတ်လမ်းကောင်းများအား Quality ကောင်းကောင်းဖြင့် ကြည့်ရှုခံစား သိမ်းဆည်းထားနိုင်စေရန် -
( ၃ ) မိမိသိရှိထားသော Movies Download - Websites ကောင်းများအား မိသားစုဝင်ချင်းချင်း ပေါင်းစု မျှဝေနိုင်စေရန် -
ဖော်ပြထားတာတွေ အပြင် တစ်ခြား Websites ကောင်းတွေလည်း ရှိပါလိမ့်ဦးမယ် - ကျေးဇူးပြုပြီး ဒီနေရာလေးမှာ မိမိတို့ သိထားတဲ့ နေရာကောင်းလေးတွေ စုပေါင်းမျှဝေပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါရစေ -
ဒီကားကို စကြည့်တုန်းက သူ့ဘာပြောချင်တာလည်း ဆိုတာ ချက်ချင်း သဘောမပေါက်ဘူး - မပေါက်ဆို ကိုယ်တွေ နေ့စဉ် ဖြတ်သန်းတွေ့ထိနေတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ လုံးလုံးကို တူမှ မတူတာ - နောက်ပိုင်းကို ရောက်သွားတော့မှ တဖြေးဖြေး သဘောပေါက်လာတယ် - ခုဆို ပြန်ကြည့်တာ လေးခေါက်မြောက်သွားပြီ - ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ဘူး - သူတို့ရဲ့ အတွေးနဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်းကို သဘောကျမိလို့ပါ - ကိုယ်မတွေးမိတဲ့ အတွေးကို သူတို့တွေးမိတယ် - မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ လူတိုင်း သိထားတဲ့ စိတ်ကူးတစ်ခုကို တစ်ခြားသူတစ်ယောက်ဆီ လက်ဆင့်ကမ်းတဲ့ အချိန်မှာ အဲ့ဒီလူ မှင်သတ်လက်ခံနိုင်အောင် ပုံဖော်ပြတဲ့ ရိုက်ချက်တွေက အကွက်စေ့လွန်းတယ် -
လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးထဲမှာ ရှိနေတဲ့ Idea ကို အိပ်မက်ဖြစ်ရပ် တစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးပြီး ခိုးဝင်တူးဖော်ကြသတဲ့ - အဲ့ထက် ပိုအံ့သြဖို့ ကောင်းတာက အိပ်မက် ဖြစ်ရပ် တစ်ခုထဲမှာပဲ နောက် အိပ်မက် တစ်ခုရှိရာ - ( Dream state တစ်ခုကနေ နောက် Dream state တစ်ခုဆီ ) ဆက်ကူးသွားကြတာ - Dream state တစ်ခုကနေ နောက် Dream state တစ်ခုဆီ ကူးတယ်ဆိုတာ မြန်မာလို နားလည်လွယ်အောင် ပြောရရင် အိပ်မက်တစ်ခုထဲမှာပဲ နောက်အိပ်မက်တစ်ခု ဆက်မက်ကြတာမျိုးပေါ့ - Dream state တစ်ခုကနေ နောက် Dream state တစ်ခုဆီ ကူးတဲ့ အချိန်မှာလည်း နောက် Dream state တစ်ခုဆီ ကူးသွားတဲ့ လူတွေကို လက်ရှိ Dream state ရှိရာဆီ ပြန်ခေါ်ဖို့ လူတစ်ယောက်ဆီ ချန်ခဲ့ရတယ် - လက်ရှိ Dream state မှာ ထိန်းမထားနိုင်တဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုခု ရှိလာရင် နောက် Dream state တစ်ခုမှာ ရောက်နေတဲ့ သူတွေကို လက်ရှိ Dream state ရှိရာဆီ ပြန်ရောက်လာဖို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူက အားလုံးကို kick လုပ်ရတယ် - ( kick လုပ်တယ် ဆို နောက် Dream state တစ်ခုဆီ ဆင်းသွားတဲ့ သူတွေကို လက်ရှိ Dream state ကို ပြန်ခေါ်တော့မယ်လို့ အသိပေးတာမျိုးပေါ့ ) နောက်ပြီး အဲလို kick လုပ်တော့မယ် ဆိုတာကိုလည်း နောက် Dream state တစ်ခုမှာ ရောက်နေတဲ့ သူတွေကို လက်ရှိ Dream state မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ သူက Music ဖွင့်ပြီး အသိပေးရတယ် - အဲမှာ ချွင်းချက် ရှိသွားတာက Dream state သုံးဆင့် ရှိတယ် ဆိုရင် ပထမဆုံး Dream state မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူက kick လုပ်လို့ မရဘူး - အဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းမှာ ပြန်ခေါ်ဖို့ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူတွေက နောက်ဆုံး အဆင့်မှာ ရောက်နေတဲ့ သူတွေအားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ Dream state ဆီ ပြန်ရောက်လာအောင် ခေါ်ပြီးမှ kick ရတယ် -
ကားထဲမှာ လီယိုနာဒို က Dream state တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းတဲ့ အဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပေါ့ - သူက အိပ်မက်ကို ဖန်တီးတယ် - အိပ်မက်ထဲက ဇာတ်ကောင်တွေကို ဖန်တီးတယ် - ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီ့ အိပ်မက်ကို အကွက်ချဖို့ကိုကျတော့ Architect တစ်ယောက် သပ်သပ်ထပ်ပါတယ် - သူ့လောက်နီးပါးတော်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ပေါ့ - ဇာတ်ကားထဲက ဒီအောက်က နေရာမှာ လီယိုနာဒိုက Dream state တစ်ခု ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတရားကို ရှင်းပြနေတာ -
လီယိုနာဒို က ဒီ Dream state တစ်ခု ဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတရားကို သူ့ ဇနီးကိုရင်းပြီး လေ့လာခဲ့တာ - ရလာဒ်ကတော့ ဆိုးသွားတယ် - သူ့မိန်းမက Dream state နဲ့ Reality ကို ကွဲကွဲခြားခြား မသိတော့ဘူး - Dream state နဲ့ Reality ကို ခွဲခြားနိုင်တဲ့ totem ဆိုတာလေးကို သူ့မိန်းမကို လီယိုနာဒို က ပေးထားပေမယ့် သူ့ဇနီးက အဲတာလေးကို သော့ခေတ် သိမ်းထားလိုက်ပြီး Dream state နဲ့ Reality ရဲ့ ကွာခြားချက်ကို မစမ်းဖြစ်ခဲ့ဘူး - အဲ့မှာ သူတို့ နှစ်ယောက်လုံး Dream state ကို Reality နဲ့ အထင်မှားသွားတယ် - ( totem ဆိုတာလေးက သူ့ကို လှည့်လိုက်ရင် Dream state ထဲမှာဆို Gravity မရှိလို့ ဘယ်တော့မှ လဲ မသွားဘူး - လက်တွေ့ဘဝမှာ လှည့်လိုက်ရင် လဲတယ် - အဲတာလေးကိုလှည့်ပြီး သူတို့က ငါတို့ Dream state မှာလား Reality မှာလား ဆိုတာ ခဲြွခားကြတာ ) သူ့မိန်းမက Dream state ကိုပဲ Reality ထင်နေတာ - ဒါကို နောက်ပိုင်း လီယိုနာဒို က totem လေးလိုက်ရှာ ပြန်စစ်ကြည့်ပြီး သိသွားတော့ ငါတို့ ရောက်နေတာ Dream state ဆိုပြီး သူ့မိန်းမကို ပြောပြ - လက်တွေ့ဘဝကို ပြန်ခေါ်တော့မှ သူတို့နှစ်ယောက်လုံး Dream state ကနေ ပြန်ထွက်လာကြတယ် - ဒါပေမယ့် ခက်သွားတာ လီယိုနာဒို က Dream state နဲ့ Reality ကို ခွဲခြား သိပေမယ့် သူ့ဇနီးက လက်တွေ့ဘဝကို ရောက်နေတာတောင် သူ့ကိုယ်ကိုယ်သူ Dream state ဘဝမှာပဲ ရှိနေသေးတယ် ထင်ပြီး သူ့ကလေးတွေဆီ ပြန်ချင်တဲ့ ဇောနဲ့ လက်တွေ့ဘဝကို ပြန်မယ် ဆိုပြီး တိုက်ပေါ်က ခုန်ချပြီး သေသွားတယ် -
ဒီကားက ပထမစကြည့်ရင် တော်တော်ရှုပ်မယ် - ဘာလို့လည်း ဆို ကိုယ်နေ့တိုင်း ဖြတ်သန်းကြုံတွေ့နေရတဲ့ အတွေးအခေါ် မျိုးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတာ မဟုတ်လို့ - ဒါပေမယ့် သူဖော်ပြချင်တဲ့ သဘောတရားကို သိရင် တော်တော်ကြိုက်သွား လိမ့်မယ်။ သြော် နောက်တစ်ချက် ရှိသေးတယ် - အဲတာကတော့ ကားထဲမှာ လီယိုနာဒို ပြောသွားတဲ့ စကား -
" Inadream your mind functions more quickly, therefore time seems to feel more slow. "
ဆိုလိုတာက ကျွန်တော်တို့တွေ အိပ်မက် မက်ကြတဲ့ အခြေအနေ တစ်ခုမှာ စိတ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုက ပိုပြီး မြန်ဆန်တယ် - ဥပမာ ရန်ကုန်ကနေ ကျိုင်းတုံ သွားမယ် - အပြင်မှာဆို လေယာဉ်နဲ့ သွားရင်တောင် တစ်နာရီခွဲလောက် အချိန်ပေးရင် ပေးရမယ် - အိပ်မက်ထဲမှာကျတော့ seconds ပိုင်းအတွင်း ရောက်နိုင်တယ် - ဒါကြောင့်မို့ Inadream your mind functions more quickly လို့ သူက ပြောတာ - အဲလို mind functions က ပိုမြန်သွားတော့ ဘာထူးခြား သွားလဲ ဆိုရင် real world မှာ ၅ မိနစ်ရတဲ့ အချိန် တစ်ခုက dream state ထဲကို ရောက်သွားရင် တစ်နာရီလောက် ပို အချိန်ရသွားတာနဲ့တူသွားတယ် - ဒါကိုပဲ Five minutes in the real world gives you an hour in the dream. ဆိုပြီး ပြောသွားတာ - ဒီ သဘောတရားကို ဒီဇာတ်ကားက အပြည့်အဝ အသုံးချသွားတယ် - ဒါကို မချိတ်ဆက်မိရင်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တာတွေကို နားမလည်ခဲ့ရင် ဖြစ်ဖြစ် ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အနှစ်သာရကို ဘယ်လိုမှ သဘောမပေါက်နိုင်ဘူး -
နောက်ဆုံး ပြောချင်တာကတော့ Inception ဇာတ်ကားဟာ တော်တော်ကောင်းပါတယ် - IMDb မှာ Rating 9.0 ရတယ် - ကြည့်စေချင်ပါတယ် - သာမန်နဲ့ မတူတဲ့ အတွေးအခေါ်သစ်ထဲ ကို ဆွဲခေါ်သွားမယ့် ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ခုကို ခံစားကြည့်ကြပါဦး -
10:14 PM LeaveaComment Read More